Abakhiqizi bezinto ze-LPG nabakhiqizi bemithi yamakhemikhali - i-China LPG nabathengisi bezinto zamakhemikhali kanye neFekthri
I-LPG nokusebenza ngamakhemikhali
Njengomholi womhlaba wonke kanye nomkhiqizi othembekile womkhiqizi we-high-pressure & cryogenic khatello yomkhiqizi embonini yegesi, i-CIMC ENRIC ibilokhu ithuthukisa kahle futhi ikhiqiza amasilayidi aphezulu ezinsimbi engenasici nohlobo olwahlukahlukene lwamathangi okugcina nawom trailer ukusebenzela amaklayenti ethu afaka imboni ehlukahlukene emhlabeni wonke dinga amandla kagesi & ne-petrochemicals.
Ngemizamo yethu eqhubekayo nokuhlangenwe nakho kwamashumi eminyaka, siphokophela ukuletha hhayi imikhiqizo ethembekile kepha nesisombululo esibanzi sokusekela ibhizinisi lakho.
I-ENRIC ineminyaka engaphezu kwamashumi amane yolwazi ekwenziweni kwemikhiqizo yengcindezi yaphakathi. Ngokuqhubeka okuqhubekayo kwe-r & d kanye nokwenziwa kwezinto ezintsha, i-ENRIC inikezela amakhasimende ngemikhiqizo engcono kakhulu yokuqashelwa nedumela eliphezulu lemakethe ephezulu. I-ENRIC iyithuluzi elikhulu kakhulu lemishini yokuhamba ye-ammonia eChina.
Amakhemikhali okulondolozwa kwezinto zamakhemikhali
Umkhiqizo we-Mid-pressure usetshenziselwa ukuthutha nokugcina izinto zamakhemikhali, ezifana negesi eyosiwe kaphethiloli, i-ammonrous ammonia, i-propylene, i-butadiene, isobutene, i-dimethyl ether nezinye izinto zamakhemikhali, ezinomthamo omkhulu, isisindo esilula nokulayisha okusheshayo nokulayisha ngokushesha isilinganiso.
I-CNG ngophethiloli ohlanzekile osetshenziswa kakhulu kwezokuhamba ngophethiloli amatekisi, amabhasi omphakathi, amandla kagesi njll
Ithangi lokulondolozwa le-LPG
I-CNG Tube Trailer
CNG Isitoreji Cascade
Isiteshi Sokuphefumulela i-CNG
Isiteshi Somama se-CNG
Isiteshi sendodakazi ye-CNG
Amafutha e-hydrogen anamandla futhi azosiza ekunciphiseni ukuphuma kwamagesi abamba ukushisa nokunye ukungcola.